Apple Watch cusub waaba la iibiyay waana kuwan astaamaha ugu waaweyn | Waxaan ka socdaa mac
Maanta waa maalintii in badan oo idinka mid ahi aadi doonaan dukaanka Apple si ay u soo arkaan, u taabtaan oo laga yaabee xitaa inay ka iibsadaan mid ka mid ah saacadaha cusub shirkadda Cupertino. Saaka waxaa bilaabmay iibinta iPhone 7 cusub iyo iPhone 7 Plus, Apple Watch Series 2 cusub iyo AirPods. Sidoo kale qaar idinka mid ah ayaa soo qaadaya badeecada la keydiyey maalmo ka hor maantana waxay u tahay maalin wanaagsan dhammaan isticmaaleyaasha Apple. Sidaa darteed, ugu horreyntii iyo kiiska iibsiga mid ka mid ah Apple Watch Series 2, waxa aan idinla wadaagi doonno dhammaantiin waa farqiga ugu muuqda ee ka muuqda qaabkii hore ee smartwatch-ka Apple oo sidaas darteed wax yar ayey u leeyihiin dabcan midka la dooranayo.
Waxa ugu horreeya ayaa ah in la yiraahdo cusbooneysiinta processor-ka ee Apple Watch Series 1 ayaa ah mid aad u fiican. Marka adeegsadayaashaas aan rabin ama aan u baahnayn wararka ay soo bandhigtay moodeelka cusub ee maanta la bilaabay ama doonaya inay lacag yar ku keydsadaan iibsashada iyagoo ku beddelaya luminta astaamaha qaarkood, tani waxay noqon kartaa tusaale la tixgeliyo. Sidaa darteed ka dib soo bandhigiddii Arbacadii la soo dhaafay aan aragno faraqa u dhexeeya labada moodel.
Dhab ahaantii Waxaa jira seddex nooc oo Apple smart watch ah. Midka kiiska aluminium ku leh, kan kiish bir ah leh iyo ugu dambeyntii kan ugu khaaska ah kiis kiimiko ah oo beddelaya qaabka dahabka. Saddexdaas nooc waxaa ka mid ah laba xajmiyadood oo kala duwan, 38 mm iyo 42 mm. Kadib waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaar aan ku kala dooran karno isboortiga, naylooni tidcan, xargaha maqaarka ama xargaha Hermes ama Nike.
Hagaag, markaan dhahnay, waxaan dhihi karnaa in qaabka dhoobada uu waxyar ka dhumuc weyn yahay inta kale. ka tagida cabbirada dhamaan moodooyinka sida soo socota:
0.1 Apple Watch Taxanaha 1
0.2 Apple Watch Taxanaha 2
0.3 Taxanaha Apple Watch 2 (dhoobada)
0.4 Apple Watch Taxanaha 1
0.5 Apple Watch Taxanaha 2
1 Qiimaha iyo helitaanka
1.1 Apple Watch Taxanaha 1
1.2 Apple Watch Taxanaha 2
Apple Watch Taxanaha 1
Apple Watch Taxanaha 2
Taxanaha Apple Watch 2 (dhoobada)
Markaan helno cabirro cad oo runtii isku mid ka ah dhammaan moodooyinka marka laga reebo kala duwanaanshahaas yar ee qaabka dhoobada, waxaan la socon doonnaa sifooyinka ugu fiican oo ka mid ah saacadahan cusub ee maanta ay soo saartay shirkadda Apple iyo noocii hore ee aynu ugu magacdarnay Apple Watch Series 0.
Dual-core S1P processor (kii hore wuxuu ahaa hal-core S1)
U adkaysanaya inuu ku buufiyo IPX7 (quusin buuxda mitirka 1 illaa 30 daqiiqo)
Dhalada Ion-X iyo gadaal isku dhafan
Muuqaalka 'OLED Retina Display' (450 nits oo dhalaal ah)
Madax-bannaanida ilaa 18 saacadood
Aluminium, bir bir ah iyo kiiska dhoobada
Dual-core S2 processor (kii hore wuxuu ahaa hal-core S1)
Caabbinta biyaha ilaa 50 m
Qurxinta 'Ion-X' (Sport iyo Nike +) ama safayr (Bir, Ceramic, Hermes) iyo dhoobada dib ugu soo celisay dhammaan moodooyinka
OLED Muuqaalka isha (1000 nits dhalaal)
Qiimaha ayaa ah midka ugu muhiimsan moodelladan waana in Apple aysan taabanin qiimayaashii hore (oo dib loogu soo ceshay processor-ka cusub ee Taxanaha 1) tanina waxay noqon kartaa qodob laga fiirsado kuwa aan u baahnayn GPS iyo caabbinta biyaha ilaa 50 m.
Model 38mm oo ah 369 euro
Model 42mm oo ah 409 euro
Model 38mm oo ah 439 euro
Model 42mm oo ah 469 euro
Ku saabsan helitaanka saacadda runti waa cadaalad. Apple wuxuu noogu sheegayaa websaydhka maraakiibta inay qaadan doonaan inta udhaxeysa 3 ilaa 5 todobaad, wax runtii runtii lagu yareyn karo saacadaha, laakiin mabda 'ahaan waxaa fiican in la cadeeyo ilaa dhamaadka Oktoobar ama bilawga Nofeembar (sameynta Iibso hadda waqtiga qorista maqaalkan) ma heli doonno. Taa bedelkeeda, keydka dukaamadu wuxuu umuuqdaa mid xoogaa kayar oo haddii ay maanta leeyihiin dhowr moodal, weli waa in la arkaa sida loo iibiyay iyo haddii ay maareeyaan in la ilaaliyo keydka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch cusub ayaa durbaba la iibiyaa waana kuwan astaamaha ugu muhiimsan
Ma jiraa qiimo dhimis markii midkii hore la keenayay?
Jawaab John Bakerma N